Iingxaki zokuziphatha kwizinja eziphezulu - ziyintoni? | Bezzia
Njengoko iminyaka ihamba, sidibana neentlobo ezahlukeneyo zezigulo okanye iingxaki zempilo. Ukuba siyabaqaphela, izilwanyana zethu zasekhaya azikho ngasemva. Bafumana iingxaki ezithile zokuziphatha. Ngaba uyafuna ukufumanisa ukuba zeziphi iingxaki zokuziphatha kwizinja ezindala?
Utshintsho olukhoyo lubangelwa kukwaluphala ezinokuthi zitshintshe amalungu amaninzi, ngenxa yokuguga kunye nokukrazula kodwa zinokuqatshelwa kwindlela yazo yokuziphatha, ngesizathu esifanayo. Ke, ungaphoswa zeziphi iingxaki ezidla ngokuphinda zivele xa abo banoboya benemini yabo yokuzalwa.
1 Ukwanda kokucaphuka
2 Ukukhonkotha ngokugqithisileyo
3 I-phobia yengxolo
4 Ukungalali, phakathi kweengxaki zokuziphatha kwizinja ezindala
5 Ukuphuhliswa kwemikhwa emibi
Liyinyaniso elokuba uninzi lweengxaki esiza kujamelana nazo zinokwahluka ngokwezizwe ngezizwe. Kodwa njengomgaqo jikelele, enye yezona zinto zixhaphakileyo kukucaphuka. Nangona kuyinyani ukuba isimilo sakhe sisenokutshintsha, kuthiwa kwiimeko ezininzi kungenxa yokuba uphinda enze utshintsho olungakumbi emzimbeni wakhe olubangela iintlungu ezahlukahlukeneyo. Ngenxa yoko, sinokubona indlela isimo sakhe sengqondo esihlala sitshintsha ngayo. Kubonakala ngathi yonke into ejikelezileyo iyamkhathaza kwaye kungenxa yolo tshintsho kwinkqubo, apho ivumba okanye kwamehlo akusekho into ababeyiyo. Kubalulekile ukuba siye kugqirha wezilwanyana kuba ezinye zezi ngxaki zinokunyangeka ngokufanelekileyo okanye zinyamezeleke ngakumbi.
Xa bebancinci, abafuni ukuba bodwa kuba bafuna inkampani, ingqalelo kunye nalo lonke uthando. Kodwa kukuba xa sele bekhulile, imbali nayo iyaziphinda. Xa bebonana bodwa, ixhala liqala ukusebenza kwaye ngenxa yesi sizathu, ukukhonkotha kuya kuqina. Oko kukwahlukana namaqabane abo obomi kubangela intlungu engakumbi. Isenokuba ngenxa yeengxaki zenkqubo yemithambo-luvo okanye izifo ezahlukahlukeneyo. Nangona kuyinyani ukuba ngamanye amaxesha siya kufumanisa ukuba amaxolo afika ngaphandle kwengcaciso ingako.
Njengoko sisazi kakuhle, kukho uloyiko oluninzi ezidla ngokuba nalo izinja. Kodwa njengoko zikhula, zinokuqina. Ngenxa yokuba ziba buthathaka ngakumbi kwaye kuqalisa ukuwohloka kweemvakalelo. Yintoni egqithisile, I-phobias ihlala ikhona kwimihla ngemihla. Ukusuka kuloyiko lwengxolo njengabasemzini kunye nogqirha wezilwanyana, phakathi kwabanye abaninzi. Into engenakuphepheka xa sele bekhulile.
Ukungalali, phakathi kweengxaki zokuziphatha kwizinja ezindala
Nangona sele isichaphazela, kwaye kakhulu, ukungakwazi ukuphumla izilwanyana zethu zasekhaya ebusuku ngokunjalo. Phakathi kweengxaki zokuziphatha kwizinja ezindala sifumanisa ukuba ukungabikho kokulala kunokutshintsha imini yabo yonke. Baya kukhathazeka ngakumbi kwaye yinto engaphezu kwesiqhelo. Ingayiyo ukungazinzi okanye ukuba ngokunciphisa iintshukumo zakho kunye nokuhamba, unobomi obungapheliyo obungakuvumeli ukuba ubuthongo obupholileyo. Kakade ke, njengoko siye sagqabaza, kwezinye izihlandlo ezininzi ingxaki yokuphuthelwa isenokubangelwa kukuba neentlungu ngenxa yesifo esithile.
Ukuphuhliswa kwemikhwa emibi
Xa sicinga ukuba sele befunde yonk’ into, indlela abaziphatha ngayo iyatshintsha kodwa ingabi ngcono. Kungenxa yoko baqala ukwenza iindlela ezintsha eziya kusimangalisa. Iinkqubo ezihlala zijolise ekubeni nemikhwa emibi okanye ecaphukisayo. Ezinye izilwanyana ziqala ukuluma izinto kunye nefenitshala endlwini okanye ngokwayo. Yintoni kokubili kwintsimi enye kunye nenye inokubangela umonakalo omkhulu, ngakumbi ukuba bayenza ngokunyanzeliswa. Ukuba oku kuyenzeka, lixesha lokuba uye kugqirha wezilwanyana ukuze akwazi ukukukhokela malunga nendlela yokunyanga ingxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Mascotas » Ziziphi iingxaki zokuziphatha kwizinja ezindala?